Ukuthengisa kokuqukethwe akuthengisi NGOKUQUKETHWE | Martech Zone
Ukuthengisa KOKUQUKETHWE akukona Ukuthengisa KUNOKUQUKETHWE
NgoLwesithathu, ngoMashi 19, 2014 NgoLwesithathu, ngoMashi 19, 2014 Douglas Karr
Ngokukhuluma nenkampani ekhiqiza okuqukethwe okuhle, baxoxile ukuthi eminye yemibono yokuqukethwe abayisebenzisile i-flagpole inqatshiwe ngoba okuqukethwe akuqondile ngqo thonya ukuthengisa kwemikhiqizo yabo noma izinsizakalo. Ugh. Yeka isu lokuqukethwe okuyinhlekelele ngokuphelele. Uma inhloso yakho konke okuqukethwe kwakho ukuthengisa okuthile, ungavele uvale ibhulogi bese uthenga izikhangiso.
Ungangitholi ngephutha - abanye abantu laphaya bafuna umkhiqizo noma insiza ezobasiza ukulungisa inkinga futhi ube nokuqukethwe okungabaholela ekuthengisweni. Kepha uma zonke isiqeshana sokuqukethwe sizama ukubayisa ukuthengisa, awunikeli ngenani elithile kuzithameli zakho.
Ngizonikeza ngezibonelo ezithile:
I-TinderBox - uhlelo lwabo luzenzela umsebenzi oyisidina wokubhala iziphakamiso nezivumelwano ezenziwe ngezifiso namakhasimende, okuvumela ukuphawula, ukufaka ulayini obomvu namasiginesha edijithali. Uma konke ababhala ngakho kwakuyizici zabo nsuku zonke, akekho owayezofika kusayithi labo. Kodwa-ke, babhala izindatshana ezihehayo ezinikeza inani kubaholi bezentengiso ababuya kaninginingi bezofunda okuqukethwe kwabo.
I-Mindjet - ipulatifomu yabo ivumela umbono, ukusebenzisana, ukwenziwa kwengqondo kanye nokuphathwa kwemisebenzi. Isayithi labo alichazi nsuku zonke ukuthi kulula kangakanani ukuthi umkhiqizo wabo wenze i-mindmap, yabo Yakha ibhulogi wabelana ngokuqukethwe okungakholeki emisha kanye nomthelela wayo emsebenzini. Ingenye yezinsizakusebenza eziphezulu zokuqagela nokuqamba izinto ezintsha kwi-Intanethi.
Ngakwesokudla ku-Interactive - bathengisa isoftware yokuthengisa ezenzekelayo… kepha ibhulogi yabo ikhuluma ngomjikelezo wempilo wamakhasimende, umjikelezo wokuthenga, inani lamakhasimende, ukugcinwa kwamakhasimende nezinye izingqinamba ezinkulu esikhaleni. Ngenkathi izimbangi zabo zihlala zibabaza ngemikhondo eminingi ngaphezulu kukashukela, i-Right On Interactive isebenzisa indlela ehlukile - ichaza ukuthi ungawathola kanjani amakhasimende abaluleke kakhulu futhi azoba namandla okuhlala nenkampani yakho ukukhulisa inzuzo ekutshalweni kwemali.
Uhlu luka-Angie - inikeza ukubuyekezwa okujulile kwabanikezeli bezinsizakalo abathembekile ngoba abadalulwanga futhi inkampani isebenza ukulamula nokuqinisekisa okwenziwayo kwezinsizakalo ezisezingeni kulabo ababhalisile. Kepha isayithi labo lihlinzeka ngemininingwane eminingi ngezimboni, izeluleko ezizenzela wena kubantu, nezeluleko eziqinile kubantu abacwaninga leso sinqumo sokuthenga esilandelayo. Abathengisi okubhaliselwe ngokuqukethwe kwabo, bandisa ukwethenjwa abathengi abanakho kubo futhi banikeze inani elingaphezu kwezibuyekezo.
Lapho umfundi efunda izindatshana, baqala ukwamukela ukuthi inkampani iyaziqonda izinselelo zabo nokukhungatheka kwabo. Ngokuqukethwe, umfundi uthola inani elengeziwe enkampanini, wakha ukwethembana nenkampani KANYE, ekugcineni, amathuba okuba ikhasimende andiswa kakhulu. Inhloso yokuqukethwe okuningi akukhona ukwenza ngokushesha ukuthengisa umuntu, ukubakhombisa ubuchwepheshe bakho emkhakheni wabo, ukubakhombisa igunya lakho, ubuholi bakho, nokunikeza inani elingaphezulu kokuthenga umkhiqizo noma insizakalo.
Uma ukufezekisa lokhu, okuqukethwe kwakho kuyathengisa.
Ukudalula: Izinkampani ezibalwe ngenhla zonke zingamakhasimende ethu.
Tags: ukuthengiswa kokuqukethweUkunika Amandla Ukuthengisa
I-Brook Daily: Thola amaTweets ahamba phambili wezintshisekelo
Amasu Okumaketha Asezingeni Eliphezulu Lokuhola